Mere Train Travel Na Germany bụ Amazing | Chekwa ụgbọ oloko
Ụlọ > Inzọ Njem Germany > Mere Train Travel Na Germany bụ Amazing
Germany nwere ugwu ndị mara mma, ime obodo na-eku ume, na cosmopolitan obodo nke na-eme ụgbọ okporo ígwè eme e ebe a-adọrọ ahụmahụ. Enwere ọtụtụ fabulous ebe ịhụ tinyere Berlin, Munich, Hamburg, Cologne, na Frankfurt, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ndị a hotspots na nta na-niile interconnected site a haziri nke ọma hi-ọsọ oloko usoro. Nke a na-eme ka ụgbọ okporo ígwè eme njem na Germany ya mfe. Ebe a bụ ihe nduzi maka holidaymakers maka ụgbọ okporo ígwè eme njem na Germany iji hụ na i nwere ihe ndị kasị na-atọ ụtọ na njem kwere omume.
E nwekwara ụzọ ndị ọzọ iji Zụlite njem na Germany dị ka anụ ụlọ elu-ọsọ ụgbọ oloko, Nke ice (InterCity Express). Nke a bụ ndị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ígwè na Germany, ejikọta isi obodo na a elu na-agba. ndị a elu-ọsọ ụgbọ oloko njem na gbapụrụ ọsọ nke ruo 200mph (320 km / h).
The kasị mma ojiji nke Train njem na Germany bụ ụbọchị, gụnyere ngwa ngwa Intercity Express, anaghị achọ oche oche. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ njem gị na e nweghị mmerụ ahụ dị ntinye akwụkwọ gị oche tupu. Secure a window oche maka ebe ndị mara mma ma ọ bụ dị họrọ oche gị iji hụ na ị na-enwe kacha nkasi obi.
Germany bụ a akwa ebe na- njem na ndị ezinụlọ. On German ụgbọ okporo ígwè ụgbọ oloko, undermụaka nọ n'okpuru afọ isii na-eme njem n'efu na enweghị tiketi dị mkpa. Overmụaka 6 ma noo n'okpuru 15 nwekwara njem ruo free mgbe ha na-ebu a ụgbọ-akwụ okenye.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-germany%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
deutschebahn	Train Travel	ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ	njem njem
Njem ụgbọ oloko, Ụgbọ okporo ígwè njem Austria, Zụọnụ njem Czech Republic, Ụgbọ oloko njem France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Luxembourg ụgbọ oloko, Ụgbọ okporo ígwè njem Switzerland, Ụgbọ oloko njem UK, Njem Europe
Ụgbọ okporo ígwè njem Austria, Ingbọ oloko na Belgium, Ụgbọ njem na Denmark, Inzọ Njem Germany, Ụgbọ oloko njem Holland, Ụgbọ okporo ígwè njem Switzerland, Zụlite njem Netherlands, Zụọnụ Ndụmọdụ, Njem Europe
Ụgbọ okporo ígwè njem Austria, Ụgbọ oloko njem France, Inzọ Njem Germany, Ụgbọ okporo ígwè njem Hungary, Inzọ Njem Italytali, Zụọnụ Ndụmọdụ, Njem Europe